Ukusetyenziswa kwesityalo sokutyunjwa kwamatye, isithwathwa sebhokisi yempembelelo, iMashwheel yomatshini wokuhlamba isanti, iCone Crusher Market
ekhaya » News & Event » Ukusetyenziswa kwamatye okutyumba
Iyintoni isityalo sokuchithwa kweTywala
Isityalo sokutyunjwa kwamatye siquka i-feeder vibrating, i-crusher ye-jaw, i-crusher enefuthe, isikrini eshukumisayo, i-belt conveyor kunye ne-centrally control control system, njl. Umthamo owenzelweyo uvela kwi-50t / h ukuya kwi-500t / h. Ukuhlangabezana neemfuno ezithile zomthengi, sinokudibanisa nezinye izixhobo ezifana ne-crusher cone, umatshini wokuhlamba, umtshini wokuthungela uthuli kumgca wokuvelisa ngamatye.
Ukusetyenziswa kweZityalo zokuTyhula iTywala
Isityalo sokutyunjwa kwamatye sisetyenziswe ngokubanzi kwimigodi, i-silicate, i-metallurgy, ukwakhiwa, umgwaqo omkhulu, uololiwe, amashishini akhemikhali njalonjalo. I-Afrika yiyona nto yesibini-yesibini enkulu kunazo zonke kunye neyesibini elandelwa ngabantu abaninzi, emva kweAsia. Njengoko siyazi, i-Afrika inesityebi samaminerali ezizityebi. Ngoko, kwiinkampani ezininzi ezinxulumene neAfrika ungabona isalathiso selitye. I-Dongmeng Machinery ilitye lokuchithwa kwelitye idunyiswa ngabathengi abaninzi kwihlabathi lonke ikakhulukazi eAfrika, njengeAlgeria, iGhana, iNigeria, iSaudi Arabia, iYiputa, i-Libya, iNingizimu Afrika kunye ne-Ethiopia kunye njll
Olunye Uhlobo lweDongmeng Machinery olubhekiselele kwiCandelo lokuHlanywa kweTywala
Izixhobo zeDongmeng Machinery zenze igalelo elikhulu kwi-SHL e-Ethiopia
Iitye zeDongmeng Machinery zixhoboza izixhobo ezisetyenziswe kwiprojekti yaseGondal-Debke e-Ethiopia
Iprojekthi eNiger yeNtshona Koloni
Iprojekthi ye-Highway evela kwi-CO iqela Co., Ltd kunye neDongmeng Machinery e-Chad
I-Plant Crush Plant Detailed esuka eDongmeng Machinery
Isityalo esityunjwe ngamatye singadibaniswa sibe ziintlobo ezintathu: uhlobo olusisigxina, oluphathekayo kunye nolunxweme. Ukukhwabanisa nokukhangela ukujonga i-toni kungama-50 kwiitoni ngeyure ukuya kwiiyure ezingama-500 ngeyure. Ubungakanani bomkhiwane ochotshoziweyo buya kusuka kwi-0 ukuya kwi-40 mm. Ukuhlelwa kobukhulu bomkhiqizo otyumkileyo kungasetyenzwa kwaye kulungiswe ngokubhekiselele kumakhasimende, izicelo ezahlukeneyo.
Ukuhlanganiswa koomatshini kunye nokucoca ukucoca okufanelekileyo kubandakanyeka kunye neenkcusher ezahlukileyo kwaye bahlanganiswe ukusabalalisa okukhethekileyo kwindlela yokucwangciswa kwempahla yabo, ukuze bancinci-baprintwe ngamasimi, umgangatho ophezulu kwimveliso echotshoziweyo, ephantsi kwothuli kwaye baya kunika Umvuzo ophezulu otyalo-mali. Iipaneli zabo zokulawula umbane ziyakwazi ukuqinisekisa ukuba yonke inkqubo ikhutshwa kakuhle, isebenzayo ethembekileyo, isebenze ngokukhawuleza kunye nokusebenza kakuhle kwindlela yokusetyenziswa kwamandla. Siyakwazi ukubonelela ukuyila, ukufakela, ukulungiswa kunye nokuvavanywa kokuvunywa kwabathengi. Sinokukunika ukwaneliseka "kwintshintshi ye-key" yokuchithwa nokukhangela inkonzo yobunjineli.